Umlilo ushiye umndeni ungenalutho | News24
Umlilo ushiye umndeni ungenalutho
Isithombe:SithunyelweAmalungu omndeni uSizakele Ngcobo, uNokulunga Mkhize kanye nNokuthula Zondi abathe basale bengenalutho emva kokuthi umlilo ushise indlu abalala kuyona ngeSonto ntambama.
UMNDENI waKwaNgcobo endaweni yakwaMachibisa ukhihla esikaNandi ngemuva kokuba indlu abebelala kuyo ishe yadilika ngeSonto ntambama.
Ilungu lo mndeni uSizakele Ngcobo uthe lesigameko senzeke ngeSonto ngabo 4pm kanti umndeni uvele wabona ngelangabi elishise yonke impahla ebiphakathi endlini.
“Nhlahla leyo bekungekho muntu Phakathi,” kusho uNgcobo obenelinye ilungu lo mndeni, uNokulunga Mkhize, elanezele ngokuthi: “Kodwa besiqeda ukukhipha ingane kuyona lendlu,” ngenkathi betshela leliphephandaba ngokwehlakale ngeSonto.
Bathe basafihle amakhanda kwamakhelwane kuze kuba bathola enye indawo abazohlala kuyo.
“Sasizwa umphakathi wonke wala kwaMachibisa ukuze sizokwazi ukucisha umlilo, wasisiza impela futhi,” kusho uNgcobo.
Uthe ithimba lakwamasipala elibhekana nezinhlekelele lize lafika emva kwehora nemizuzu engamashumi amathathu.
“Kushe yonke impahla ebiphakathi endlini, akukho lutho esalile, sisele nezinto esasizigqokile ngalelo langa kuphela,” kusho uNgcobo.
Umakhelwane la lo mndeni osafihle khona ikhanda, u-Andile Mbanjwa uthe kukhona amalungu omphakathi ayenza sengathi alekelela lo mndeni ngokucisha umlilo nokukhipha izimpahla kodwa ayeze ngenhloso yokuzontshontsha.
UNgcobo uthe maningi amalungu alo mndeni okubalwa kubona izingane ezincane ezinye zazo ebezilele kwelinye igumbi ngesikhathi kuqubuka ilangabi kodwa uthe bakwazile ukuzi khiphela ngaphandle.Uthe eyodwa yezingane enesifuba somoya ixhilwe intuthu okugcine kumphoqa ukuthi athenge ubisi ukuze izolulama.
Uqhube wathi ngoLwesibili lo mndeni uhlangane nekhansela lendawo, uXolani Ngongoma othinte abakwamasipala ababhekana nezinhlekelele abathembise ukuthi kungekudala kukhona uxhaso oluzolethelwa umndeni.
UXolani Ngongoma ukuqinisekisile ukuthi uxhumene nomnyango wakwamasipala obhekene nezinhlekelele emva kokuhlangana nalo mndeni. Uthe unikele ngemali yakhe kumama walo mndeni ukuze ezokwazi ukwenzela izingane izitifiketi zokuzalwa njengoba nazo zishe imlilweni futhi aphinde athole okuya ngasethunjini.
Ikhansela liphinde lathi lithole umbiko othi lo mndeni awulwamukelanga usizo obelulethwe umnyango obhekele izinhlekelele. UNgcobo ukuqinisekisile lokhu wathi isizathu salokhu yingoba uxhaso obelulethiwe belunganele amalungu omndeni.